विद्यालय सञ्चालन तथा बन्दको अधिकार स्थानीय तहको भए पनि केन्द्र सरकारले नै निर्णय गर्दै आएको छ ।
२०७८ असार २७, आईतवार १०:१६ बजे
काठमाडौं । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको महिना दिन वित्न लागिसक्यो । तर लाखौं विद्यार्थीहरु विद्यालय जान पाएका छैनन् । शहरी क्षेत्रमा अनलाइन लगायतका वैकल्पिक माध्यमबाट विद्यार्थीहरुलाई पठनपाठनमा जोड्ने प्रयास भइरहे पनि ग्रामिण क्षेत्रमा त्यो पनि हुन सकेको छैन ।
हामी निरन्तर आन्दोलनमा छ र हामीले अघि सारेका ३४ वटा मागमध्ये एउटा शिक्षकलाई अनिवार्य खोप उपलब्ध हुनुपर्ने पनि हो । शिक्षकहरुले खोप नपाएसम्म भौतिक रुपमा विद्यालयमा उपस्थिति हुन सक्दैनौं भन्ने हाम्रो अडान छ । सबैलाई खोप दिने शिक्षकलाई नदिने भनेको ? उपेक्षाको पनि हद हुन्छ नि ! सम्भार अनलाइनखबर
पौष मसान्तभित्र सवारी कर नबुझाए जरिवाना लाग्ने
इजरायल जान इच्छुक कामदारसँग आवेदन माग : मासिक २ लाख तलब
सातवटै प्रदेशलाई अक्सिजन भरेर राख्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन
प्रदेश २ : कानुन अभावमा शिक्षा विकास निर्देशनालय कामविहीन
२०७८ असार २७, आईतवार १०:१८ बजे